ရန်ပိုင်| December 21, 2012 | Hits:6,592
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ကို မဲဆောက်သို့ ပြန်ပို့သရဖူနှင့် အလှမယ် ရွေးချယ်ခြင်း ပြဿနာများနရဲစွမ် ဇတ်ကား အတွက် ထိုင်း ဒါရိုက်တာ တောင်ငူကို လာရောက်လေ့လာSexy မော်ဒယ်လ်တွေ ကပြမယ့် ပါတီ ကျင်းပမယ့်နေရာ အပြောင်းအလဲရှိSexy မော်ဒယ်လ်တွေ ပါတဲ့ Dance For Life ပါတီပွဲ ကျင်းပမယ်
မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 22, 2012 - 12:41 am ၀င်ကြေးခ မတတ်နိုင်လို့ သည်လို စင်မြင့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ပါဝင် မဆင်နွှဲနိုင်သူ အခြေခံ လူတန်းစားတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ တခုပဲ အကြံပေးချင်တာက ပြည်ပမှာ လုပ်တဲ့ ပွဲတွေမှာလဲ သီးသန့်ပွဲတွေမှာ အရက်သေစာ တည်ခင်း ဧည့်ခံပေမယ့် သည်လို လေဟာနယ်၊ လူထုနဲ့ လုပ်တဲ့ ပွဲတွေမှာ အရက်သေစာ ပေး မသောက်ပါဘူး။ သင်္ကြန်ပွဲလို လမ်းမပေါ် မူးမူးနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ပေး မဖြစ်ပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ indoor party တွေမှာ ရှန်ပိန်သောက်ပေမယ့် လမ်းမပေါ် အများပြည်သူနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ပွဲတွေမှာ ရှန်ပိန် မသောက်ပါဘူး။ ဗမာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အညီ ကျင်းပကြရင် ကောင်းပါမယ်။ သင်္ကြန်မှာ လမ်းပေါ် လူရှေ့ မူးရူး၊ ဖက်ရမ်း၊ နမ်းရှုတ်၊ အမြင်မတော်တာတွေ တွေ့လာရလို့ပါ။ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ချစ်သူ ခင်သူနဲ့ အနမ်းဖလှယ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမြင်မကောင်းအောင် ရာဂစိတ်တွေနဲ့ နမ်းနေတာမျိုး မဖြစ်သင့်၊ မလုပ်သင့်တာ ပြောတာပါ။ ကြင်နာအနမ်းကလေးတွေက ယဉ်ကျေးဘွယ် အမြင်လှပါတယ်။
Reply Shwe Yoe December 22, 2012 - 7:01 am Let the peopleachance to enjoy life. I wish you all, “Happy New Year”.
Reply MYATTHULATT(BANGKOK) December 23, 2012 - 10:01 am ၀မ်းသာပါတယ် ဒီသတင်းကြားရတာ..HAPPY NEW YEAR 2013 FOR MYANMAR..